Ampidiro ny emulator Nintendo DS amin'ny iPhone tsy misy Jailbreak [NDS4iOS] | Vaovao IPhone
Elaela izay emulator ho an'ny iOS Tsy manao ny fisehoan'ny fiarahamonina izy ireo, isan-taona aorian'ny fanambarana ny jailbreak ny kinova vaovao an'ny iOS, maro amintsika no miandry ny fampiharana toa ny NDS4iOS na PPSSPP havaozina ary hatao mifanentana hahafahany mankafy ny fahafahan'ny ny fitaovantsika sy ny tombotsoan'ireo tontolon'ny fialamboly ireo.
Tamin'ity taona ity dia toa izany nanjary sarotra tamin'ny PPSSPP ny raharaha, ary noho ny olana ara-teknika sasany mifandraika amin'ny fanovana anatiny ao amin'ny iOS 9 dia tsy maintsy miandry am-paharetana isika ary mivavaka mba ho tafavoaka velona amin'ity kinova vaovao ity ity emulator ity. NDS4iOS dia mbola mifanaraka amin'ny iOS 9, ary izao dia nanao dingana lavitra kokoa, ahafahana mametraka azy tsy misy jailbreak.
Amin'ny tranga maro dia misy pejy natokana hanavotana ireo fampiharana sesitany ny AppStore sy ampahafantaro azy ireo mari-pankasitrahana Mba hametrahana amin'ny iOS tsy mandeha amin'ny alàlan'ny lehibe A dia miresaka ohatra ny tranokala iEmulator aho, izay nanao izay hahazoana antoka fa hamela ny fametrahana ireo rindranasa ireo avy amin'ny Safari mihitsy ary tsy mila jailbreak.
Amin'ity indray mitoraka ity dia ny iOSEM no nitondra antsika niverina tany amin'ny emulator Nintendo DS sy DSi NDS4iOS, ary anio dia hanazava ny fomba fametrahana azy izahay.
1 Tutorial momba ny fametrahana
2 Game Transfer Tutorial
Tutorial momba ny fametrahana
Avy amin'ny fitaovan'ny iOS no anokafanay Safari sy hiditra amin'ity adiresy manaraka ity iosem.us/app/install/nds.html
Rehefa miseho ity efijery ity dia tsindrio izahay apetraka ary ekena ny fampitandremana izay hilaza aminay fa "iosem.us dia manandrana mametraka" nds4ios ""
Miverena amin'ny efijery an-trano an'ny fitaovana ary miandry ny fampiharana apetraka.
Alohan'ny hanokafana ny fampiharana dia mankanesa any amin'ny Settings> General> Profiles ary hahita profil napetraka toa ilay sary etsy ambony ianao, kitiho eo.
Haneho anao ny fampahalalana momba ny mombamomba anao i iOS, anisan'izany ny fampiharana azy (nds4iOS), kitiho ny Trust "the profile name" ary ekeo ity hafatra manaraka ity.
Ankehitriny dia apetrakao ny fampiharana ary avelao izy hitantana azy, mijanona fotsiny ny fampidirana ROMS, fiasa iray izay efa natao teo aloha tamin'ny fampiharana fa nahavita nanala an'io asa io i Nintendo ary vita amin'ny PC na MAC izao. , hasehonay anao ny fomba hanaovana izany.
Game Transfer Tutorial
Mikaroha amin'ny Internet ny ROM tianao ampidinina, tsy afaka mametraka rohy izahay satria manimba ny zon'ny mpamorona, fa tsy tokony hitady anao mihoatra ny fikarohana Google fotsiny izany.
Filan-kevitra: Mitadiava rom misy (E) na Eoropa amin'ny anarana hahazoana antoka fa amin'ny fiteninao izany ary tsy ampidininao ny kinova Anglisy na Japoney.
Raha voageja ilay ROM alaina dia alao antoka fa esory ilay izy, azonao atao ny mampiasa WinRAR amin'ny Windows na Keka amin'ny OS X, ny rakitra vokariny dia tokony ho ".nds".
Sokafy ny iTunes ary ampifandraiso amin'ny PC na Mac ny fitaovana iOS anao.
Ao amin'ny fizarana Applications napetraka ao amin'ny iPhoneo, mankanesa any ambany mba hahitanao ireo izay manohana ny famindrana rakitra, mitadiava ary kitiho ny NDS4iOS.
Sintomy ny fisie ".nds" mankamin'ny lisitra eo ankavanana (foana raha tsy misy ROM efa enta-mavesatra) ary zahao amin'ny iPhone-nao fa efa nampidirina tsara tao amin'ny app NDS4iOS izy io.
Raha nandeha tsara ny zava-drehetra dia efa anananao izany, atombohy izao ny ROM tadiavina ary mankafiza ny lalao Nintendo DS tianao indrindra amin'ny fitaovana OS anao.
Fanamarihana: Ny fitaovana misy chip A7 na ambony ihany no afaka mihazakazaka ny lalao Nintendo DS rehetra amin'ny 60 fps (iPhone 5s na avo kokoa), ny iPhone 5 na ny fitaovana misy puce A6 dia handray lalao ekena ary ireo manana puce A5 (iPhone 4s, iPod Touch 5G) arakaraka ny lalao dia ho ambany 20 fps.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fampianarana sy torolàlana » Ampidiro ny emulator Nintendo DS amin'ny iPhone tsy misy Jailbreak [NDS4iOS]
Alejandro Luengo dia hoy izy:
xD na adala dia mametraka taratasy fanamarinana sinoa tsy fantatra fiaviana amin'ny findaiko aho, andao handeha, ary amin'ny maha-developer ahy dia tsy manoro hevitra an'iza na iza hanao izany aho.
Valiny tamin'i Alejandro Luengo
Misaotra amin'ny torohevitra. Fa aiza no ahafahanao milalao an'ireo kilalao kilasika ireo?
I Luis, noho ny amin'Andriamanitra, mividiana DS hitanao fa misy tanana tsara, tena tsara lavitra
miala tsiny fa hitanao 🙂
Marcos Suarez dia hoy izy:
Tsy afaka mahita pejy misy efitrano miasa aho 🙁
Valiny tamin'i Marcos Suárez
Tsy afaka manome anao aho, azafady, na izany aza, afaka manao Google «roms nds» ianao dia ho hitanao fa mora 😀
Toa sahala amin'ny manome pas maimaimpoana ho an'ny finday ity tratran'ny viriosy ity.
Tsy dia fantatro loatra ny tena risika raisinao amin'ny fametrahana an'ity taratasy fanamarinana ity. Misy olona afaka manazava amiko kely ahy ve raha hanapa-kevitra aho na tsia?
Misaotra betsaka ary arahaba!
Ity valiny ity dia mihatra aminao sy amin'ireo Alexandros roa etsy ambony:
Ny fametrahana ny mombamomba ny fiaviany tsy fantatra ao amin'ny iOS dia miteraka risika amin'ny fiarovana, indrindra arakaraka ny karazan'ilay mombamomba azy, ireo profil ireo dia mety ahitana tenimiafina ho an'ny tamba-jotra Wi-Fi, fikirakirana VPN, mari-pahaizana, politika fiarovana ary maro hafa ny fitaovana.
Miaraka amina karazana mombamomba anao manokana, azonao atao ny mahafantatra lavitra ireo fampiharana napetraka amina fitaovana sy angona hafa isan-karazany momba azy, toy ny isan-jaton'ny bateria sy ny hafa, azonao atao ihany koa ny mametraka politika fiarovana (fitantanana ny teny miafina hidirana amin'ilay fitaovana, na izany aza. tsy azo ovaina izany, mila ny mpampiasa manova azy isaky ny X isaky ny fotoana na manahirana fa tsy PIN), ary mametraka WebClips aza, fampiharana sasany ao amin'ny Sprignboard izay hitsin-dàlana amin'ny tranokala.
Ireto dia vitsivitsy monja amin'ny fampiasana sy karazana piraofilina misy, ankehitriny, andao hiroso amin'ny piraofilina mametraka an'ity tranonkala ity:
Ny mombamomba napetrak'i iOSEM.US dia mari-pankasitrahana, ity profil ity dia ampiasaina hanomezana alalana ny fisokafan'ny fampiharana ivelan'ny AppStore (NDS4iOS amin'ity tranga ity), azon'ny mpampiasa atokisana ny mombamomba azy ary ny fampiharana napetraka miaraka amin'ity taratasy fanamarinana ity dia azo tanterahina ao amin'ny fitaovana tsy mandeha amin'ny alàlan'ny magazay Apple, midika izany fa afaka manokatra ny emulator isika nefa tsy ankatoavin'ny Apple sy ireo fampiharana hafa rehetra napetraka miaraka amin'ny taratasy fanamarinana iray ihany, tsy misy zavatra hafa intsony, tsy manokatra varavarana hametrahana fampiharana hafa io raha tsy misy ny fanekenao , midika fotsiny izany fa ny rindranasa rehetra napetraka miaraka amin'ity taratasy fanamarinana ity (ny famelana ny fametrahana azy ireo amin'ny alàlan'ny fanekena avy amin'ny Safari ny fampitandremana izay mangataka ny hametraka fampiharana) dia azo alefa amin'ny fitaovanao, avy amin'ny Fikirana> General> Profiles> TARGET PROFILIKA ho fantatrao izay fampiharana apetraka mampiasa ity profil ity ary manafoana ny fahatokisana nomena azy ary mamafa ny rindranasa rehetra misy azy.
Inona no fanatsoahan-kevitra raisintsika?
1. Mampidi-doza ny fametrahana profil avy amin'ny loharanom-baovao tsy fantatra satria midika izany fa ny app izay apetraka miaraka amin'ity profil ity dia azon'ilay mpampiasa sokafana, na dia misy malware aza.
2. Ny emulator dia fampiharana izay tsy anohanan'i Apple ao amin'ny AppStore ary izany no antony tsy maintsy hampiasan'izy ireo ireo tranokala ireo sy ireo mari-pankasitrahana ireo mba hametahana sy hampiasana azy ireo taloha miaraka amin'ny fitaky ny fanovana ny daty.
3. Tsy tokony hampidi-doza ity mombamomba anao manokana ity, izaho manokana dia nametraka izany ary matoky ary mampiasa NDS4iOS tsy misy olana ary tsy manana fihetsika tsy mahazatra ny fitaovako (azonao ferana foana ny fampiasana angona avy amin'ity rindrambaiko ohatra), raha tsy atokisanao azy, dia tsotra toy ny tsy fametrahana fampiharana intsony avy amin'ny Safari.
4. Azo atao foana ny mamafa ny profiles sy ny apps mifandraika amin'izy ireo mba hahitana ny filaminana nananantsika teo aloha.
Manantena aho fa voavaha ny fisalasalanao, na i Actualidad iPhone na tsy tompon'andraikitra amin'ny fampiasana izay mety omena an'ity profil ity aho, rehefa nilaza fa napetraka aho ary matoky izany amin'ny fitaovako tsy misy fanelingelenana.
Mario mendoza dia hoy izy:
Bro tsy azoko ireo app amin'ny iTunes, ny an'ny Netflix ihany, inona no azoko atao?
Valiny tamin'i Mario Mendoza
sira dia hoy izy:
Ilay iray napetraka mandritra ny 2 andro dia tsy mandeha intsony dia tsy mandeha
Mihodina ary maty
Mamaly an'i salpa
Mario, Salpa ary Boja, tsy ianao no voalohany milaza zavatra toy izao amiko, amin'ny fitaovako miaraka amin'ny iOS 9.1 dia mandeha foana io ary eken'ny iTunes ireo fampiharana, toa tsy ianao irery no manana an'io olana io, manolo-kevitra aho mitahiry ny lalao ataonao foana ianao fa afaka manao azy amin'ny PC na amin'ny cloud ary raha tsy mahita fomba hanaovana izany ianao na hamaha ny olana dia esory ny piraofilina sy ny app (satria tsy hanampy ireo ianao amin'ny toe-javatra toy izany), omeko vahaolana ianao fa ny iOSEM.US no afaka manadihady ny raharaha ...
Mitovy tanteraka amiko izany. Nanao zavatra lavorary aho ary tsy avelany hiditra ...
Salama Juan, ny zava-mitranga amiko amin'ny emulator dia ny fametrahana azy tsara mandritra ny roa andro, tsy maninona ny zava-drehetra
Fa eo ihany ilay kisary sisa tavela
Tsy azoko ny zava-mitranga
Niezaka ny hamafa azy aho ary hametraka azy indray ary izaho:
«Tsy afaka maka ny fampiharana. Amin'izao fotoana izao dia tsy afaka mametraka nds4ios ianao »
Toa nosakanan'ny Apple ... O_o
Manana iOS 9.2 aho ary tsy mametraka emulator, na kinova taloha, ho an'ny rafitra fiasa vaovao an'ny iPhone-ko ve izany?
Vao haingana aho no nanatsara ny iOS 9.3 ary tsy manome ahy ny safidin'ny piraofilina izany.
Tsy mamela ahy hisintaka izy io
Zvezdanov (@Zvezdanov) dia hoy izy:
Tsy mamarana ny fisintomana ho ahy izy io, mivaingana foana alohan'ny famaranana ary manipy ahy ny hafatra hoe "tsy afaka vitaina izao ny fampidinana", dia mahagaga ahy izany satria noho ny emulator an'ny GBA dia tsy nanana olana tamin'ny fametrahana sy ny fandefasana azy aho. Angamba vintana ratsy fotsiny io.
Mamaly an'i Zvezdanov (@Zvezdanov)
Ahoana no fomba hampiasako azy amin'ny iPad, hoy ny fisie .nds ary nampitahako azy tamin'ny Dropbox fa tsy miseho ao amin'ilay application ilay efitrano.
Springtomize 3 efa ho avy any Cydia nohavaozina amin'ny iOS 9